Gudoomiye Muungaab oo irdaha shaqada ka xirtay dhallinyarada beesha Habargidir! | Habargidir Community
Gudoomiye Muungaab oo irdaha shaqada ka xirtay dhallinyarada beesha Habargidir!
Habargidir.info- Tan iyo markii loo doortay Muungaab gudoomiya gobolka Banaadir iyo duqa magaaladda Mogadisho waxa uu bilaabay in uu si aan ganbasho laheeyn u cunsuruyeeyo dhallinyarada wax baratay ee beesha Habar gidir ee ka shaqeeyo gobolka Banaadir.
Muungaab waxa uu shaqooyinka gobolka badankood siiyay dhallinyarada beesha Abgaal, waxyaabaha ay la yaaban yihiin dhallinyarada Habargidir waxaa ka mid ah in xitaa qofkii iyaga ah oo shaqo loo magacaabo uusan xafiiska shaqada uu ku magacaaban yahay ka socoto uusan imaan karin, halka shaqada uu qabanayo qof Abgaal ah. Waxaa Xamar ka socda abaabulo ay wadaan dhallinyarada Habargidir kaas oo la doonayo in lagu muujiyo qabyaaladeeynta qaawan ee lagu haayo ee ay hormuudka ka yihiin Muungaab iyo Hassan Sheikh.
Siyaasiyiinta Abgaal waxa ay garan waayeen in aysan Soomaalidu is nacbeeyn ee waxa la isku dilay oo dowladii jirtay loo buburiyay ay aheed cadaalad daro iyo nin jecleeysi, arinta noocaas ahna ku danbeynayso burbur.
Sanadihii u danbeeyay beesha Habargidir waxaa ku dhacay hoos u dhac ku yimid miisaankoodii siyaasadeed taas oo loo aneeynayo Habargidir oo huwatay shaati Hawiye, iyaga oo iska dhaadhiciyey in kursiga dalka ugu sareeyo uu fadhiyo nin Hawiye ah sidaas daradeedna Dawladda lala shaqeeyo maadaama awood qeybsiga Beelaha ku dhisan nin iyaga ku bah ah uu kursigooda ku fadhiyo, soomaaliyana weli aysan gaarin doorasho.
Beesha Habar gidir waxaa la gudboon in aysan sii huwnaan shaatiga Hawiyaha maadaama siyaasiyiinta Abgaal aysan fahmeeyn dulmiga uu ku sameynayaan Beelaha kale oo walaalahood ah, ayna aaminsan yihiin in weli iyaga gaar u leeyihiin.
Dhaawacyada siyaasadeed ee Habargidir gaaray waxaa ka mid ah in saamiga ay doowladdaku leeyihiin loo dhiibay wiilal yar yar oo ka tirsan xisbi diineedyo rag qoowleeysato ah leeyihiin kuwaas oo aan ogeeyn in kursiga ay ku fadhiyaan beel ay ku matalaan.